Jubaland ma waxay ka talawday xayndaabka Dowladda dhexe | Somsoon
Home WARAR Jubaland ma waxay ka talawday xayndaabka Dowladda dhexe
Jubaland ma waxay ka talawday xayndaabka Dowladda dhexe
Maamulka Jubaland ayaa markaan u muuqda in uu ka talaabsaday xayndaabka Dowladda faderalka Soomaaliya si loo suurta geliyo caleemasarka Axmed Madoobe.
Tan iyo markii ay Dowladda faderalka Soomaaliya amartay in diyaaradaha tagaya Magaaladda Kismaayo ay soo maran Muqdisho, markii u horreysay ayaa diyaarad aan soomarin Muqdisho waxay ka degtay magaaladda Kismaayo.
Diyaaradda ayaa wafdi kasoo qaaday Magaaladda Nairobi waxayna si toos ah uga dejisay xarunta ku meelgaarka ah ee maamulka Jubaland.
Madaxweyneyaashii hore ee Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Galmudug Cabdi Kariin Xuseen Guuleed iyo xubno Baarlamaanka ka tirsan ayaa tagay Kismaayo waxaana soo dhaweeyay Madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan.
“Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in aad noqotaan wafdigii ugu horreeyay ee Kismaayo u yimaada caleema saarka,……dalkii waa nabad, nimankii nabadiidka ahaa maahane dhib kale ma jiro” ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan.
“Maanta farxad weyn ayey noo tahay in aan maanta u imaano Xafladda iyo damaashaadka Caleemasaarka Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe” ayuu sheegay Madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed.
Waxaa uu hadalkiisa ku daray in uu ka xunyahay “cuneqabateynta saaran” Jubaland.
Madaxweynihii hore ee Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa dhankiisa sheegay in dadka Jubbaland ay muujiyeen dareenkooda iyo maamul jacaylkooda islamarkaana aysan qaban in hawada laga xiro.
TV-ga Jubaland ayaa sheegay in Diyaaradda uu leeyahay maamulka Jubaland islamarkaana loogu talagalay in ay Kismaayo geyso wufuudda caleemasaarka ka qayb galaysa.
Ma cadda faah-faahinadda ku saabsan xilliga Jubaland ay Diyaaradaan iibsatay, Shirkadda ay ka iibsatay iyo qiimaha ay ku iibsatay.
Balse ilo-xog ogaal ah ayaa Somali Online News u sheegay in Diyaaraddu ay leeyihiin ganacsato Soomaali ah magaceeduna yahay Fly-SOM islamarkaana ay duulimaadyo ka sameyso goboladda Dalka.
Majiro war kasoo baxay Dowladda faderaalka ah ee Soomaaliya oo ku saabsan diyaaradda maanta ka degtay Kismaayo.
Waxaa jira xubno jooga Muqdisho oo ay ka mid yihiin Madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya iyo Xildhibaano Baarlamaanka ka tirsan oo doonaya in ay ka qayb galaan caleemasaarka Axmed Madoobe.
Dowladda faderalka ah Axmed Madoobe uma aqoonsana Madaxweynaha Jubbaland.
Article horeGaadiidka ka dhex shaqeeya Muqdisho iyo Jowhar oo dib u shaqa bilaabaya.
Article socoda Duqa degmadda Garowe oo la afduubtay